Eey askariyad ah oo madaxeeda la dul dhigay abaalmarin gaareyso 70 kun doolar… – Hagaag.com
Eey askariyad ah oo madaxeeda la dul dhigay abaalmarin gaareyso 70 kun doolar…
Posted on 30 Luulyo 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Waxaa la sheegay eey askari dhedig ah oo ka tirsan ciidanka la dagaalama ka ganacsiga iyo tahriibinta daroogada ee dalka Colombia oo loo yaqaano “Sombra” ayaa gelisay ciriiri nolosha burcada tahriibinta daroogada dalka Colombia, taasi oo ka dhigtay in ay ballan qaadaan in ay bixin doonaan abaal marin weyn qofkii dila, maadaama ay wax yeeleysay ama curyaamisay howlgaladooda qarsoon, waxay u horseeday khasaaro culus howlgalada lagu ogaanayo oo ay bileyska ka taageertay tiro kor u dhaafeysa 2 kun oo kg oo daroogada Cocaine oo lagu qariyey boorso safar, doonyo iyo xamuulka miraha waaweyn.
Sidaa daraadeed Sombra waxay noqotey bartilmaameedkii ugu dambeeyay ee burcada ugu caansan dhinaca daroogada. Ciidamada booliska dalka Colombia ayaa dhawaan shaaca ka qaaday in burcadda loo yaqaan “Gulf clan” oo ku faanay in ay heystaan ciidan rag mujrimiin ah, waxay soo bandhigeen abaal marin gaareyso 70 kun oo doolar qofkii dila eeydan khatarta ah ama soo qabta.
Mas’uuliyiinta ayaa ku keentay hanjabaada in eeyda “Sombra”laga wareejiyo dekeda mashquulka badan ee xeebaha Caribbean Colombia loona wareejiyey caasimadda Bogota, halkaasi oo laga shaqaaleysiiyey garoonka diyraadaha ee caalamiga.
Kadib markii ay dhameysato wareega shaqadeeda ee lixda saac ah, Sombra ayaa lagu qaadaa gaari xamuul oo yar oo leh daaqado dul dulela, sida caadiga waxaa la socda labo ka mid ah ilaalo hubeysan. Inkastoo ay jirto technology casriga ah ee dagaalka ka dhanka ah ka ganacsiga daroogada, hadana sidaasi oo ay tahay sanka Sombra ayaa ka horumarsan kana casrisan technolojiyada, sidaa darteed loogama maarmo xirfadan khatarta ah.
Qaar ka mid ah hawlaha ugu muhiimsan oo ay fulisay, helideeda in ka badan shan tan oo daroogada cocaine oo la rabay in loo tahriibiyo Yurub, waxay ku jirtay sanduuq ay ku jiraan muus, sidoo kale dhowr bilood ka hor waxay qabatay 77 kg oo Cocaine ah oo ku qarsooneyd meel aan la gaari karin gudaha mishiin warshadeed.
Saraakiisha ayaa sidoo kale ku waramay in sanka Sombra ee cajiibka ah uu kashifay 245 howlgal oo lagu qabtay daroogo laba garoon ee ugu weyn dalka Colombia.
Sombra ayaa ah eeyaha Jarmalka nooca Shepherd, guulooyinkeeda ayaa ka dhigay mid caan ku ah warbaahinta, mar kasta oo ay la socoto ilaaliyaheeda garoonka magaalada Bogota taageerayaal badan ayaa sawiro isaga qaada, waxay tahay mid fudud hogaaminteeda, amaradana si deg deg u fahamta.